Ndekupi kwandinogashira yangu yemubatanidzwa blog?
Svondo, Zvita 9, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Chishanu, mushure memusangano wedunhu, paive neakanakisa network uye ini ndakamisa mibvunzo yakawanda.
Ndiri kuzosundira hurukuro refu nguva inotevera, uye ndinovimba kuti iwedzere kudyidzana - zvinoita sekunge paive nekuziva kukuru kubva kumabhizimusi emuno nezvekuti pasocial network uye blogging zvingabatsira sei mabhizinesi avo zvakanyanya.
Mumwe wemibvunzo yakajairika ndeyekuwedzera bhurogu kune yako yemabhizimusi saiti bhurocha. Kutanga rega nditaure kuti ini handife ndakakurudzira kutsiva bhurocha rako saiti ine blog - ndinotenda musimba rechiratidzo, kushambadzira, uye nehunhu hwakarongeka huvepo hwewebhu.
Makambani anogara achibatsirwa nekuwedzerwa kwemablog blog, kunyange zvakadaro, kana zviwanikwa (nguva netarenda) zvichibvumidza uye kambani ichibvumidza (kujeka). Mubvunzo ndewokuti blog yemubatanidzwa inofanirwa kuverengerwa sei mune yewebhu webhusaiti.
Ini ndinofanira kubatanidza blog mune yangu yemabhizimusi saiti kana kuitisa iyo kumwe kunhu?
Chinonyanya kukosha: Kubatanidza blog mune yako webhusaiti webhusaiti kunoda kuti iwe uchengetedze kuvimbika nekambani yako brand. Hazvireve kuti haugone kuseka kana kunyora zviri pachena… zvinongoreva kuti vanhu vanozobatanidza zvirimo nekambani yako pane nemushandi ari kuzvinyora.
Kunyora pamhuri, chitendero, kana zvematongerwo enyika kana kupfuta (kunyora zvisizvo) pane imwe nhaurwa kunokanganisa mashandisiro anoita kambani yako. Iwe unozofanirwa kushandisa imwe yekuchenjera kuchenjera kuchengetedza yako kambani kana brand.
Kana yako blog yakagamuchirwa zvakasiyana, yakanyanya yechiratidzo chako uye inogona kupa imwe yekuwedzera rusununguko mukunyora. Ini handisi kuzokuudza kuti utore imwe pamusoro peimwe - zviri kwauri kuti yakawanda sei yaunoda kuzivisa kuruzhinji. Uine bhurogu yekambani, uchafanirwa kuramba uchizvibvunza kuti, "Ndiwo here meseji yandinoda kuti kambani yedu isangane nayo?"
Pane injini dzekutsvaga dzinobatsira uye ruzivo rwevashandisi mabhenefiti ekupatsanura zvakajeka bhurogu yako mukati kubva kune yako webhusaiti webhusaiti. Vatengi uye tarisiro vava kutanga kudzidziswa pamakambani mablog uye nekuvatsvaga.
Kana iwe ukatsvaga "Kambani Yezita Blog", yako blog yemubatanidzwa ichave mhedzisiro? Blog yemushandi? Mutengi asina mufaro? Edza uye uone! Uyu mugumisiro wekutsvaga waunofanira (uye unogona nyore) kuva wako.
Ndingaite Sei Ini Kubatanidza Blogs pane yangu Kambani Saiti?
Nzira yakapusa yekumisikidza yako blog blog sekubatana nekambani yako ndeyekuiwana mune chero blog subdomain kana subdirectory. Kukurumbira kwe "blog" muURL kunovimbisa kuti yakanyatsorongedzwa nemaSejini Ekutsvaga:
Izvo zvakati, tora mukana wako webhusaiti blog pane yako saiti peji remba! Ini handingaratidze zvisina kurongwa mablog blog pane rako peji remba, ini pachinzvimbo ndaingoratidza zvinongedzo, zvakanyorwa zvakatorwa, uye pikicha yemunyori zvine mukurumbira pane peji reimba munzvimbo yayo yemukati yezvinyorwa sezvakanyorwa.
Iwo mainjini ekutsvaga haazokuranga iwe (zvakapetwa zvemukati) kwechinyorwa - asi iwe unogona kubatsirwa nekuenderera uchichinja zvemukati papeji rekutanga.
Ongorora: Kuwedzera pikicha yako pachako kunofanirwa kuve kudiwa chero bhurogu. Izvo zvakajeka zvinopa chinoonekwa chekuti izvi zvirimo zvakanyorwa nemunhu uye zvisina kunyorwa kuburikidza neyekushambadzira kana yeruzhinji hukama hwehukama maitiro. Ah ... uye ndokumbirawo muve nechokwadi kuti HAZVIMBORWI kuburikidza nekushambadzira kana ruzhinji hukama hwekugadzirisa maitiro - hapana anozoteerera kana iwe uchidaro.
Iwe unogona kusanganisa yemahara, yakavhurika sosi mhinduro senge WordPress (Linux-yakavakirwa) kana an ASP.NET blogging mhinduro kune yako wega 'blog' dhairekitori uye dhatabhesi pane yako saiti, asi chengetedza isina musono maitiro kuburikidza neyetsika theme iyo inosanganisa yako yemabhizimusi saiti saiti.
Kana rako rakakura bhizinesi, iwe ungangoda kutsvaga yemubatanidzwa blogging mhinduro kugadzirisa zvirimo uye nekuzvironga nenzira kwayo kuti ive yepamusoro kuwanikwa neinjini dzekutsvaga.
Kuverenga kwakawanda pamusoro Corporate Blogging:
Nei iri blog? Nei isiri foramu?
Common yemubvunzo blogging mibvunzo uye mhinduro.
Kuita a Corporate Blogging Isu.
Tags: Blogblog dhairekitoriblog subdomainBloggingkambani blogyemubatanidzwa blog
Yakakura positi inotsanangura maitiro ekuvhara gap kubva kumawebhusaiti kuenda kumablog. Ndafara kusangana newe paMBO Chiitiko!
Zvita 10, 2007 na7:44 PM
Ndine mubvunzo wakawanda kubva kumakambani akasiyana nezve kuwedzera bhurogi kune webhusaiti webhusaiti, mazhinji acho ane chekuita nezvavanofanira kunyora nezvazvo.
Nyora zvese! Corporate blog inogona kutonakidza… vanogona kuisa mifananidzo inosetsa kubva muhofisi, makuhwa, majee nezvimwe.
Tarisa paYouTube blog uye uchaona kuti vanoisa zvese (kunyangwe ruzivo rwusina hukama neYouTube).
Sarudzo iyi idambudziko kune mazhinji emakambani. Ini ndinoshandira kambani hombe yekutsikisa uko mhando yakakosha uye zvemukati zvemukati ndizvo zvese. Chidimbu chega chega chezvinyorwa chinoda kupepetwa uye kubvumidzwa saka zvanga zvakaoma kubvuma kusununguka kwemablog. Isu chido mablogiki akabatanidzwa, asi kugamuchirwa kwave kunonoka nekuda kweidzi nyaya dzemakambani emhando uye nekudaro mashoma mashoma asina-akabatanidzwa mabloggi akagadzirwa. Zvinosuwisa.